Ogaden News Agency (ONA) – Jahawarerka haysta shacabka Itobiya iyo Cabdi iley oo Itobiya-nimadii u shaqayn la,dahay
Jahawarerka haysta shacabka Itobiya iyo Cabdi iley oo Itobiya-nimadii u shaqayn la,dahay
Posted by ONA Admin	/ November 23, 2013
Xukuumadaha aan sumcadda wanaagsan lahayn ee mucaarad xoogan uu ka soo horjeedo waxay ku dadaalaan inay dibadda u raraan colaada gudahooda ka jirta waxayna ku dadaalaan inay abuuraan xasarad colaadeed iyo dal duulaan ku soo ah dalkooda oo shacabka lagu jeediyo. Waxaad moodaa xukuumadda Wayaanaha ee ka talisa Itobiya inay heshay fursadaa oo hadda shacabkii ka soo horjeeday u jeedisay in lagu banaanbaxo safaaradaha Sacuudiga ee caalamka.
Inta aanay bilaabin Sacuudigu qab-qabashada ay ka wadaan dalkooda oo dhamaan dadka ajnabiga ah een siday sheegayaan aan haysanin sharciga dal-ku-jooga lagu hayo, waxaa la sugayay in laga abaabulo banaabaxyo dhamaan magaalooyinka waaweyn ee Itobiya gaar ahaan Adis ababa, taasoo la filayay inay shacabkii ka soo horjeeday Wayaanaha ku dhiiradaan banaanbaxyadaa lagaga soo horjeedo dhibaatada nololeed ee ka jirta Itobiya iyo cadaalad darada iyo xukunka macangaga ah ee xooga ku haysta shacabka. Nasiibdaro waxay u foofeen shacabkii Itobiya meeshii ay la doonayeen Wayaanuhu. Waxaa u muuqday cadaw aan jirin oo dibadda ah in loo abuuray shacabkii Itobiya. Sacuudiga waxaa ka horeeyay Masar iyo muranka biya-xidheenka oo shacabka loogu sheegay inay Masar ka soo horjeedo horumarka Itobiya. Mashruucii ahaa in Masar loo jaheeyo shacabka oon si fiican u hirgalin ayaa waxaa soo saaray filamaan muujinaya askar Sacuudi ah oo shaqaale Itobiyaan ah qaraacaya oo si aan fiicnayn oon waafaqsanayn sharciga kula dhaqmaya.
Shacabka oo cabudhsanaa oo doonayay meel ay ku neefsadaan ayay fursad u noqotay arimahaa ka aloosmay Sacuudiga, waxayna durbadiiba isugu yeedheen inay muujiyaan wadiniyadooda oy ku banaanbaxaan Sacuudiga, taasoo hadda ku sii socota in laga dhigo cadaawad u dhexeysa shacabka Itobiya iyo Carabta idilkeed (Halkan Riix).
Arintaa waan garanay iyada, hakaa ahaato shacabka Itobiya wadiniyad ama haka ahaato aabow midka yar iga celiyoo midka weyn igu sii daa, laakiinse arinta qosolka leh ee meela badan lagaga sheekaysanayo oo shacabka Itobiya ay ka mid yihiin waa hantida faraha badan ee la sheegay inuu la soo cararay Cabdi iley isagoo leh waxaan ugu deeqayaa dadkii Itobiyaanka ahaa ee Sucuudiga laga soo eryay. Wariye Noora Afgaab oo Addis ababa wararka nooga soo dirta waxay noo sheegtay in aad loola yaabay caqli xumada haysata ninkan, waxaana meela kala duwan laga soo wariyay in xukuumadda EPRDF qudheeda ay la yaabtay talaabada uu qaaday gacan-ku-dhiigle Cabdi iley, waxaana la sheegayaa in si hoos ahaaneed looga qaaday hantiduu waday iyadoo aan TV-ga Itobiya laga daawanin siduu doonayay. Waxaa uga horeeyay gacan-ku-dhiigle Cabdi Iley arintan mid u dhiganta markuu daba-dhilif Khadar Macallin iyo ninkii lagu dalacsiiyay Cabdirashiid Duulane ay ka ururiyeen xoolaha iyo dhalinyarada Ogadenya kuwaasoo iyagoon tababar la siinin lagu baneystay miinadii lagu aasay xadka u dhexeeya Itobiya iyo Eretreya.
Waxay ka mid tahay arimaha noocan ah liidanaanta haysata daba-dhilif Cabdi iley iyo kuwa la caqliga ah ee aakhira iyo aduunba ku seegay inay noqdaan Itobiyaan. Waa kuwa markay dhaqaaqaan lagu sheekeysto oo dhabarka laga taabto iyagoo lagu qoslayo.